विवाह उत्सव लागि तयारी अगाडि सुरु हुन्छ। हरेक विस्तार भावी दुलहीलाई एक उत्सव सजावट सबै तत्व बाहिर लाग्यो, यो उनको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन को छ। सायद सबैभन्दा राम्ररी outfit, सामान, पाठ्यक्रम, चुनिएको र यसको छवि अभिन्न भाग हो जो एक फूलगुच्छा। यसको आधुनिक रूप मा, दुलही गरेको फूलगुच्छा देर XIX सताब्दी मा, अपेक्षाकृत हालै देखा पर्नुभयो। तथापि, पुरातन विवाह समारोह सधैं मानिस र प्रकृति र यसको मौलिक "अभिभावक" एकाइ को एकता चित्रण गर्छ भनी जीवित बिरुवाहरु र फूल को एक सजावट सँगसँगै छन्। को परिष्कृत XVIII सताब्दी, द्वारा आविष्कार थियो फूल को भाषा, जहाँ रंग, आकार र बिरुवाहरु सबैभन्दा घनिष्ठ भावना र अनुभव कुरा गर्न सक्छ विविधता मद्दत संग। त्यसैले, कोमल गुलाबी गुलाब आनन्द बताइएको, चिया - बारे अनन्त प्रेम, रातो - आवेग को, सफेद - शुद्धता र नैतिक शुद्धता, सौन्दर्य, प्रेम र आकर्षण र peony बारेमा सुनगाभा भाषणको - लामो र खुसी विवाहित जीवनको इच्छा, डेजी - बारेमा गहिरो भावना र भक्ति।
एक फूलगुच्छा छनौट, यो उपकरणसँग सम्बन्धित कारक केही खातामा लिनुपर्छ। पहिले, यो यो outfit राम्रो अनुकूल छ कि महत्त्वपूर्ण छ र सफलतापूर्वक छवि पूरक र दोश्रो कुरा, यो सानो र हल्का हुनुपर्छ, त्यसैले यो परम्परा आदर आफ्नो टाउको अविवाहित प्रेमिकाहरुलाई अन्तमा, मूल, विशेष पुष्प व्यवस्था भन्दा यो फेंक, सुविधाजनक थियो worthily शैली, दुलही को आकर्षण र सौन्दर्य जोड।
तपाईं महंगा फूल पसलहरूमा पुनरावेदन गर्न सक्नुहुन्छ, र सौन्दर्य, आनन्द र उत्सव को त्यहाँ आफ्नै विचार साकार, आफ्नो हातमा एक दुल्हन फूलगुच्छा बनाउन। विवाह को पूर्वसन्ध्या मा एक फूल पसल फूल र Ornamental बिरुवाहरु को पात को एक फूलगुच्छा लागि आवश्यक छ, साथै अनुसार उपायहरु संग, बनाउन सजावट टिप्न। यो wickerwork, सुकेको शंकु, मश, हुन सक्छ मयूर पंख , आदि
दुलही गरेको फूलगुच्छा बनाउन दुई सरल र मौलिक तरिका विचार गर्नुहोस्। पहिलो, अधिक परम्परागत, गुलाबी र हरियो गुलाब, व्यापक carnations लम्बी, जामुन (सेतो वा हरियो) संग twigs समावेश हुनेछ, दुई तत्व बोटहरू, पुष्प र चटाई कर्ड देखि बुना गोलाकार। हरेक सङ्कलन गर्ने संरचना को भाग, एक थप सजावटी र symmetrically दुवै पक्षले दुई twigs को तत्वहरूका लागि जामुन को sprigs यसलाई सम्मिलित बडा र अधिक भव्य थियो फूलगुच्छा तिनीहरूलाई पाश गर्नाले, aspidistra पात obkladyvayut गुलाब। यस पक्षलाई अलि गुलाब थप्दा। त्यसपछि, फ्रेम को किनारा carnations को फूलगुच्छा र आफ्नो पाश crooking मा। लुपमा एक स्ट्यापलर प्रयोग राखिएको थियो। सबै overtighten पातलो डोरी को आधार मा stems, को को अन्त्य सफासँग एक लाइन मा पङ्क्तिबद्ध stems। त्यसपछि पुष्प चटाई किनारा आफ्नो आधार एक फूलगुच्छा संग र्याप र यो एउटा सानो धनुष बनाउने र समाप्त जारी, सजावटी कर्ड मुड कस्नु। तिनीहरूलाई थप शानदार बनाउन एक फूल व्यवस्था तपाईं एक सुरक्षा मोम संग छिडकना सक्नुहुन्छ को हरियो पात। आफ्नो हातले विवाह फूलगुच्छा तयार, भेला हुन्थे। यसको भिन्न: सट्टा aspidistra पात को प्रयोग गर्न सकिन्छ चिरहरिलता stems, धेरै राम्रो छ, जो गुलाब संग संयुक्त। छोटो किनारा मा फूलगुच्छा र लामो चरण को बुनाई फ्रेम र यसलाई एक पक्ष बाट ड्रप stems। बनेको bouquet peonies, आवश्यक छैन हरियो पात थप सजावट को, फूल आफूलाई धेरै रसीला र मोटा छन्। तिनीहरूलाई परिपत्र ट्रयाक राख्नुहोस्, को align र नरम साटन टेप वा कपडा को एक टुक्रा र्याप stems।
अर्को तरिका - जो हात मा हङ गर्न सकिन्छ साटन रिबन मा एक कचौरा, आफ्नो हातमा एक दुल्हन फूलगुच्छा बनाउन। यो मूल संरचना सबै रंग रंग contrasting नजिक बाट संकलित छ। मुख्य कुरा आकार एक चिल्लो गोलाकार आकृति कायम गर्न मद्दत गर्नेछ जो नै, थियो टाउको छ। यसैले, देखि पुष्प स्पन्जले एक चक्कु एक सानो बल कटौती। हामी प्वाल मार्फत आफ्नो केन्द्र एक मा प्रदर्शन र साटन टेप यो बल एकाइ तल देखि फिक्सिंग को लुपमा घुसाउनुहोस्। त्यसपछि सबै सरल छ। आफ्नो हातले विवाह फूलगुच्छा बहु-रंग फूल टाउको बनेको छ घटाउनुहुनेछ गर्न तिनीहरूलाई स्पन्जले सम्पूर्ण मंडल भन्दा प्रत्येक अन्य नजिक सम्मिलित, stems। बिस्तारै फूल बल सङ्कलन। फूल टाउको यहाँ प्रकाश वायुमय पंख संग संयुक्त गर्न सकिन्छ, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सजावट संग यो ज्यादा छैन।
आफ्नो हातमा एक दुल्हन फूलगुच्छा बनाउने, सिलोफन प्रयोग छैन, रंगीन लपेटन कागज - यसलाई सस्तो र छाडा हेर्न हुनेछ। बस साटन, ब्रोकेड वा रेशम र नाजुक zadekoriruyte रिबन वा कर्ड को stems र्याप। ठूलो अलंकृत bouquets अब पनि वोग छैन। परिष्कृत सादगी र कोमल - कि फूल प्रबन्धको शैली को आधार छ। मूल र विशेष दुल्हन bouquets, आफ्नै हातले सिर्जना, पाठ्यक्रम, आफ्नो व्यक्तित्व र नाजुक स्वाद बाकसगोलिचिन्ह, दुलही को नजर पूरक गर्न सक्षम हुनेछ।
कसरी आफ्नै हातले घर लागि सुगंध बनाउन
कसरी आफ्नो घर मा आफ्नो हातले काठ फर्श स्थापना गर्न
आफ्नो हातले एक फोम कटर कसरी बनाउने?
चूहों लागि जाल: "सबै क्रोध" गर्न क्लासिक देखि
बच्चा के oblazit को औंलाहरु मा एक छाला छ?
हामी एन्ड्रोइड हार्ड रिसेट गर्छन्
भिटाली Dubinin: जीवन र कार्य
ताल Elovoe। स्प्रूस लेक मा आराम
नीलो लेक (अब्खाजिया) - एक अद्वितीय प्राकृतिक ल्यान्डमार्क
Konstantin देवदार: जीवनी, काम, वैज्ञानिक गतिविधि